Manana ny endriny vaovao afrikanina afrikanina miaraka amin'ny Saudi Arabia izay mitarika sy toerana any Maraoka ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO)
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Manana ny endriny vaovao afrikanina afrikanina miaraka amin'ny Saudi Arabia izay mitarika sy toerana any Maraoka ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO)
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • fivoriana • Vaovao farany momba an'i Maraoka • Vaovao • People • fanorenana • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • WTN
Morocco dia vilany fandringanana ny dinastia sy ny kolontsaina. Izy io no nahatonga azy ho tanàna mety indrindra hanavaozana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany izay noterena handohalika.
I Morocco dia mety ho ilay firenena afaka manitsy ny tsy nety tao anatin'ny fifidianana sekretera jeneralin'ny UNWTO roa lasa teo ary nametraka ny hoavin'ity masoivohon-tserasera mikambana miaraka amin'ny fanohanana ara-bola ilaina.
I Maraoka no mety ho toerana mahatonga ny fizahantany indray ho lasa mpitarika ny toekarena manerantany sy ny fianakaviana manerantany.
Ny tsiambaratelo indrindra, fa ny tena zava-dehibe indrindra koa, General Asss Assembly ho an'ny Fikambananan'ny fizahantany manerantany (UNWTO) dia nifindra tamim-pahanginana nanomboka tamin'ny Oktobra 2021 ary hotanterahina izao manomboka ny 30 Novambra hatramin'ny 2 Desambra 2021, any Marrakesh, Morocco.
Ny fanendrena an'i Zurab Pololikashvili ho sekretera jeneralin'ny UNWTO mandritra ny vanim-potoana manaraka amin'ny 2022-2025 dia hofidina. Misy ny vintana hanitsiana ny lesoka lehibe iray.
Ny famindrana ny foiben-toeran'ny UNWTO avy any Madrid, Espana, mankany Riyad, Arabia Saodita, dia antenaina ho ampiana amin'ny fandaharam-potoana ary manapa-kevitra.
Fihaonambe UNWTO 2021, Marrakesh, Maraoka
Raha tsy namoaka fanambarana na fanambarana an-gazety, dia nampahafantarina androany ireo mpikamban'ny Fikambanana fizahan-tany momba ny fizahantany fa hisy fiovana daty andrasana amin'ny fivoriambe faha-24 ho avy.
Ny GA dia hatao araka ny nomanina tany am-boalohany tao amin'ny tanànan'i Marrakesh Marrakesh ny 30 Novambra hatramin'ny 2 Desambra 2021. Antenaina ny fanovana ny daty ary tsiambaratelo misokatra, vao nambara.
I Maroc dia toerana fitsangantsanganana sy fizahantany afrikanina lehibe, ary iharan'ny COVID-19, toy ny ankamaroan'izao tontolo izao.
UNWTO dia notsikeraina ho tsy mahomby ary tsy miaina ny fanamby natrehin'izao tontolo izao fizahan-tany hatramin'ny nivoahan'ny COVID-19 tamin'ny martsa 2020.
Tsy ho toeram-pivorian'ny General Assembly fotsiny i Maraoka. Tsy hampiantrano azy fotsiny ao amin'ny firenena iray izay manolo-tena amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, fa ao amin'ny firenena izay mandray ity hetsika manandanja ity amin'ny fanoherana rehetra raha toa ka efa antenaina ny COVID-19.
Hetsika iray io izay ahafahan'ny fanjakana mpikambana manitsy lesoka nanomboka tamin'ny taona 2018. Hetsika iray ihany koa io izay ny tranon'ny UNWTO dia azo nafindra voalohany hatramin'ny nanatanterahana ny masoivoho manokana UNWTO.
Miankina amin'izany rehetra izany, ny UNWTO dia mety ho lasa fikambanana voalohany manana famatsiam-bola ampy, fanampiana ary haverina amin'ny toerany ho mpitarika manerantany sy ekipa mpilalao ho an'ny sehatry ny fizahan-tany ho an'ny daholobe.
Mba hamerenana amin'ny laoniny ny ara-dalàna, ny olan'ny fanodikodinam-bato amin'ny taona 2017 ary amin'ny 2021 indray dia azo resahina ihany alohan'ny fanamafisana ny sekretera jeneraly ny fe-potoana 2022-2025.
I Maraoka irery no toerana tsy ahafahan'ny sekretera jeneraly amin'izao fotoana izao hiampangana azy sy ho mpitsara miaraka.
Arabia Saodita dia niaina hatramin'ny naha-tompon'andraikitra voalohany ary betsaka kokoa amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Miaraka amina miliara vonona hampiasa vola, ity dia tolokevitra manintona lavitra ho an'ny fikambanana iray manana teti-bola mitentina 8 tapitrisa dolara fotsiny, ny ankamaroany dia nandany ny dia tamin'ny sekretera jeneraly sy ny namany. Arabia Saodita ho setrin'izany dia mahatsapa fa misy foibe vaovao any Riyadh hiantoka ny fitoniana ara-bola ananan'ity masoivohon'ny Firenena Mikambana ity. Noho izany, tolo-kevitra ny hamindra ny foiben-toerany avy any Madrid mankany Riyadh dia antenaina fa hanampy ao anaty fandaharam-potoana.
Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy miresaka an'izany rehetra izany ny fandaharam-potoana. Anjaran'ireo mpikambana ao amin'ny UNWTO izao no mamita fandaharam-potoana amin'ny fomba ara-potoana. Anjaran'ny mpikambana ihany koa ny manao fandaharana amin'ny fivezivezena mankany Marrakesh, ka ny fifidianana malalaka momba ny olana momba ny fizahan-tany dia azo hanamorana sy ahazoana antoka.
Ny mpitondra ihany no antenaina, amin'ny sehatry ny fahasalamana manerantany ihany koa, ny indostrian'ny tsy miankina, ny lohan'ny fikambanana, ary ny haino aman-jery maro karazana, dia asaina hanatrika ny fivoriambe. Mila fitarihana ny fizahan-tany manerantany, ary manana ny tombony i Morocco, izay mety ho ny fotoana farany, hanavotana ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany
Ny fandaharam-potoana ankehitriny ataon'ny sekretera UNWTO:.
Talata, Novambra 30, 2021
10:00 - 11:00 Komitin'ny programa sy ny tetibola
10:00 - 11:00 Komity amin'ny famerenana ny fangatahana ho mpikambana ao amin'ny Affiliate
11:30 - 13:00 fivoriana faha-114 an'ny Executive Council
12: 00 - 14:00 Fivoriana faha-43 taonan'ny mpikambana ao amin'ny UNWTO
15:00 - 16:30 Komity misahana ny fizahan-tany sy ny faharetana
15:00 - 16:30 Komity misahana ny fizahan-tany sy ny fifaninanana
15:00 - 17:00 Vondrona miasa amin'ny Fehezan-dalàna Iraisam-pirenena momba ny fiarovana ireo mpizahatany
15: 00 - 18:00 Fivoriana faha-43 taonan'ny mpikambana ao amin'ny UNWTO
16:30 - 18:00 Komity momba ny statistika
16:30 - 18:00 Komity momba ny fanabeazana an-tserasera fizahan-tany
19:00 - 22:00 sakafo hariva tongasoa
Alarobia, Desambra 1, 2021
10:00 - 10:30 Fanokafana ofisialy
10:45 - 13:15 fivoriana faha-1
13:15 - 13:30 Sary vondrona
15:00 - 15:30 Komitin'ny fahazoan-dàlana
15:30 - 18:30 fivoriana faha-2
20:30 - 22:30 sakafo hariva
Alakamisy, Desambra 2, 2021
10:00 - 13:00 Fivoriana lohahevitra: Fanavaozana, fanabeazana ary fampandrosoana any ambanivohitra mba hiverenana tsara kokoa
14:30 - 17:30 fivoriana faha-3
14:30 - 16:30 Birao mpikambana ao amin'ny Affiliate
17:30 - 18:30 Fivorian'ny Mpikambana
20:00 - 22:00 sakafo hariva
Zoma, Desambra 3, 2021
10:30 - 12:00 fivoriana faha-115 an'ny Executive Council
12:00 - 12:30 Komitin'ny programa sy ny tetibola
Fitsidihana ara-teknika (TBC)
kitiho eto raha mila fanazavana fanampiny momba ny Fivoriambe faha-24 an'ny UNWTO.